Port nke Koper, Marina Koper - Koper
Port nke Koper
Adreesị: Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia;
Ekwentị: +386 5 662 61 00;
Oge ọrụ: Mon. - Sat. site na 08:00 ruo 16:00, Sun. 08:00 ruo 15:00.
Port nke Koper bụ ọnụ ụzọ ámá oké osimiri dị na Slovenia , site na nke a na-eduzi ahia ahia. Ọ bụkwa ihe kachasị mma njem nleta, n'ihi na a na-echebe ụlọ na owuwu nke oge ndị Venetian. Na-agafe n'ókèala n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ihe ndị kachasị emetụ n'akụkọ ihe mere eme.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere ọdụ ụgbọ mmiri nke Koper?
Port nke Koper dị n'etiti nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri abụọ nke Europe - Trieste na Rijeka. E guzobere ya na mmalite nke narị afọ nke 11 ma na-arụ ọrụ taa. Ụgbọ mmiri ahụ na-ekpuchi ebe dị 4,737 m², nke na-agụnye ụlọ 23, site na 7 ruo 18.7 mita dị omimi. E nwere 11 ndị ọkachamara na ọdụ ụgbọ mmiri, mana e nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri, nke nwere ebe 11,000 m².
Port nke Koper na - aga n'ihu - - ọhụụ ọhụrụ ga - apụta, a na - agbatịkwa ndị agadi. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke na-ebu ibu na-abawanye site n'afọ ruo n'afọ. Na n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, e nwere ụlọ nkwakọba ihe ekpuchi, yana ebe nchekwa, ụlọ elu na tankị maka ibu mmiri. Site n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Koper na-ebufe ihe ndị dị ka mkpụrụ si Ecuador, Colombia, Israel na mba ndị ọzọ, ngwá ọrụ, kọfị, ọka. Ụgbọ mmiri ndị a sitere na Middle East, Japan na Korea. Na-arụ ọrụ nke ọma na njem ụgbọ mmiri, ekele nke ndị njem nleta nwere ike ịba Italy na Croatia.
Port nke Koper malitere ịmalite ngwa ngwa mgbe ókèala ahụ so n'òtù Venetian Republic. Mgbe ọchịchị Habsburg bibiri ebe ahụ, e nyere ya aha nke ọdụ ụgbọ elu nke Austria. A na-eduga ahịa nke ọma ruo mgbe a na-akpọpụta ụgbọ mmiri ndị dị nso na Trieste na Rijeka n'efu.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ahia site n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Koper ji nwayọọ nwayọọ laa n'iyi, ruo mgbe ọnọdụ London na Memịndum nke Nkwado Ndị Mmadụ na-akwado na ọkwa ya na 1954. N'ime oge arụghị ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dabara adaba, ya mere, ọ dị ọtụtụ iri afọ iji weghachite ikpo ọkụ ahụ. Na 1962, mmepụta Koper dị nde 270,000.
N'oge ugbu a, ọdụ ụgbọ mmiri bụ ihe dị mkpa na njikọta na Slovenia na mba ndị ọzọ. Ụgbọ mmiri ndị njem na ndị njem nleta na-ama ebe a. Ụgbọ mmiri ahụ dị mma, na nso ọdụ ụgbọelu mba abụọ. Ụgbọ mmiri Portorož dị kilomita 14, na ọdụ ụgbọ mmiri Ronchi dị kilomita 40.
Ejila nkà na ụzụ nke oge a rụọ ọdụ ụgbọ mmiri nke Koper, a na-esikwa na isi ụlọ ọrụ iwu, nke a kwadebere dịka teknụzụ dị elu. Ndị njem na-abịa na Koper, ga-emegharị na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, lee ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ndị a na-ahazi n'oge okpomọkụ n'oge ọ bụla.
Ị nwere ike iru n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Koper site na njem ụgbọelu site na ọdụ ụgbọ ala mpaghara ma ọ bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ebe dị anya site na ha ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ihe dị ka 1.5 kilomita.
Parker Parker Warner
Ebe obibi ndị mọnk Carthusian
Ụlọ Tower Tower (Tirana)
Viking ụlọ-ngosi nka Pjodveldisbaer
Hepatic pancakes si beef imeju - uzommeputa
Ihe eji eme ulo - nchịkọta ndị mbụ maka ofe na ọ bụghị naanị!
Kampsis - kụrụ ma lekọta
Esi ewepu ụzọ abụọ ahụ?
Nri na agwa
Akwụkwọ mgbidi "ọcha Roses"
Sansevieria - nlekọta ụlọ
Zoro ezo na ihe ndị ọzọ
Samsa na cheese
Na ihe ị ga-eyi uwe na-acha uhie uhie - 36 foto nke ụta na-acha uhie uhie
Brian Cranston na-egwuri egwu n'ihe nkiri ahụ banyere ahịa ọgwụ
Masks maka akpụkpọ anụ nke ihu - ọkachamara ọkachamara na nlekọta ụlọ
Canopies nke osisi
Ghee dị mma na ihe ọjọọ
Nwa nke nwere ZRR - esi enyere aka ikwu okwu?
26 ụzọ dị iche iche ị ga-esi gbasaa ndụ nke ngwaahịa